Hohatsaraina ny famatsian-drano eto Antananarivo | JIRAMA
Hohatsaraina ny famatsian-drano eto Antananarivo
Fantson-drano mirefy 90 km eto Antananarivo no hohavaozina miaraka amin’ny orinasa TRG International avy atsy Afrika Atsimo. Fokontany 14 no hanatanterahana ny asa amin’izao dingana voalohany izao.
Manohy ny famahana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny JIRAMA amin’izao fotoana izao. Ankoatry ny fametrahana siniben-drano amin’ny toerana maro dia efa miroso amin’ny fanoloana ireo fantsona tranainy sy manary rano ihany koa ny orinasa, izay hiarahany manatanteraka amin’ny orinasa TRG International avy atsy Afrika Atsimo.
Fokontany miisa 14 no voakasik’izao dingana voalohany izao : Ambondrona – Ankadifotsy Befelatanana – Andravoahangy – Isotry Antohomadinika – Ambodirotra Antsakaviro – Antanimora Ampasanimalo – Ambohimitsimbina – Ambohitsoa – Andohatapenaka – Anosipatrana – Mahamasina Atsimo – Ambatobe – Soanierana – Antsalovana.
Hametrahana famatsian-drano vonjimaika ny faritra sasany hahafahana miantoka ny fitohizan’ny famatsiana.